राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा : कुन प्रदेशमा कुन दलको कति मत ? – Puleso
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा : कुन प्रदेशमा कुन दलको कति मत ?
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा : कुन प्रदेशमा कुन दलको कति मत ?
पुलेसो १२ माघ, २०७७, सोमबार १७:४२
निर्वाचन आयोगले माघ २४ गते तय गरिएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गरेको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहका १५०६ र प्रदेश सभा सदस्य ५५० गरी २०५६ मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। जसमा महिला मतदाता ९०७ र पुरुष मतदाता ११४९ रहेका छन्।